AI နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး ကုန်စုံလုပ်ငန်းတိုးတက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? – Ramsey Elbasheer | History & ML
AI နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး ကုန်စုံလုပ်ငန်းတိုးတက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
by Phue Pyae Maung
ဒီ post မှာတော့ Ocado ဆိုတဲ့ company မှာ AI ကို အသုံးပြုပြီး ကုန်စုံလုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်လုပ်ပုံကို case study အနေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။
Ocado ကတော့ ဗြိတိန်မှာရှိတဲ့ Tim Steiner တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အွန်လိုင်းကုန်ပစ္စည်းအရောင်းအဝယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုကတော့ Ocado ကို အွန်လိုင်းကုန်စုံအရောင်းဆိုင်အဖြစ်ပဲသိကြပေမယ့် တကယ်တော့သူကတီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Ocadoဟာ အွန်လိုင်းအနေနဲ့ပဲစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်ဝယ်ယူသူ ၅၈၀,၀၀၀ လောက်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ စတိုးဆိုင်သီးသန့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ စီးပွါးရေး ကောင်းကောင်းလည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက် စက်ပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာအကူအညီလိုအပ်လာပါတယ်။
အစမှာပိုင်းလောက်မှာတော့ သူတို့လိုအပ်တဲ့ Hardware နဲ့ Software တွေအတွက် ready made ရှိပြီးသား product တွေကိုပဲဝယ်သုံးလိုက်ကြပေမယ့် အခုလိုဖြေရှင်းချက်ဟာ ရေရှည်အတွက်မလုံလောက်မှန်းသ်ိသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူတို့ လိုအပ်တဲ့ software နဲ့ Hardware တွေကိုကိုယ်တိုင်တီထွင်ပြီး အသုံးပြုကြပါတယ်။
ယနေ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Ocado က end to end e-commerce ကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားကအခြားကုန်စုံဆိုင်တွေဖြစ်တဲ့ Canadian grocer Sobey’s, French retailer Groupe Casino, Aeon in Japan, Kroger in the United States, ICA in Sweden စတဲ့ ဆိုင်တွေအထိပါ ရောင်းချပေးလျက်ရှိပြီး တစ်ဖက်မှာလည်း Ocado နည်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Software, Hardware တွေနဲ့ အခြားကုန်စုံဆိုင်တွေအမြတ်အစွန်းရရှိရေး၊ ရေရှည်တည်တံ့စွာလည်ပတ်နိုင်ရေးတို့ကို ကူညီပေးလျက်ရှိပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ပထမဆုံး ကုန်စုံဆိုင် အက်ပလီကေးရှင်းတီထွင်မှုမှစကာ Alexa app ရှိတဲ့ ပထမဆုံး ဗြိတိန်စူပါမားကတ်ကိုတီထွင်နိုင်သည်အထိ Ocado နည်းပညာက စက််မှုလုပ်ငန်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
Ocado ရဲ့ warehouse ကိုကြည့်ရင်လည်း Internet of Things, Robotic, Big Data, Machine Learning, AI စတာတွေကိုအသုံးပြုထားပြီး အားလုံးကအလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၅ မိနစ်အတွင်းမှာတင် orderပေါင်း ၅၀၀၀၀ ကို အပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဘောလုံးကွင်းသုံးကွင်းစာလောက်ရှိတဲ့ warehouse ကြီးကို စောင့်ကြည့်တာတွေ၊ customer တွေရဲ့ အမှာစာတွေ သက်ဆိုင်ရာ station တွေဆီပို့တာတွေကိုလည်း စက်ရုပ်တွေနဲ့ပဲ အကုန်လုပ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Ocado system ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်း ဘယ်ရာသီဥတုမဆိုဖြစ်စေ၊ ပရိုမိုးရှင်းကာလတွေမှာဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကျရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်စေ အွန်လိုင်းကနေ ကုန်စုံဝယ်ယူသူများအဆင်ပြေအောင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
warehouse မှာရှိတဲ့ စက်ရုပ်တွေရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းအားကလည်း Machine Learning ကြောင့်ပိုကောင်းလာတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ Machine Learning က ရွေ့လျားနေတဲ့စက်ရုပ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတိုက်မိအောင်၊ စက်ရုပ်တွေက ပစ္စည်းတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာချအောင်အပြင် ဒီစက်ရုပ်တွေ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမရှိအောင်စောင့်ကြည့်ပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာတွေကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
AI ဘက်ကလည်း ဘယ်ပစ္စည်းတွေကိုတော့မှာထားပြီ၊ ဘယ် customer ကိုပို့ပေးရမယ် စတဲ့ အချိန်နဲ့ တပြေးညီအချက်တွေကို system ကသိအောင်ကူညီပေးပါတယ်။
အဲ့လိုတီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့ Ocado က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဘက်မှာလည်း လေးစားလောက်စရာကောင်းအောင်တီထွင်ခဲ့တာတွေ ရှိပါသေးတယ်။
ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်အရ နှစ်စဉ် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အစားအသောက်တန်ချိန် ၁.၃သန်းခန့်ကို ဖြုန်းတီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Ocado က ဒီပြဿနာအတွက် Machine Learning ၊ Ai ၊ Data analytics တွေကိုအသုံးပြုပြီး ကုန်ပစ္စည်း ၆၀၀၀၀ မှာ ၁ ခုလောက်ပဲ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြစ်နိုင်မယ့် smart platform ကိုတီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီ smart platform က customers တွေလိုအပ်တဲ့ အစားအစာတွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးပြီး suppliers တွေနဲ့ orders တွေကိုညှိပေးပါတယ်။
နေ့စဉ် order ပေါင်း သန်း ၂၀ ခန့်ကိုလက်ခံပြုလုပ်နေရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း အစားအစာလတ်ဆတ်မှုအမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်ပြီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေလျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီ platform က suppliers တွေအနေနဲ့ discount ချချင်ရင် ချလို့ရမယ့်အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုလည်းတွက်ချက်ပေးပါသေးတယ်။
Ocado ရဲ့ AI နဲ့ machine learning က အစားအသောက်တွေပျက်စီးမှုလျော့နည်းအောင်သင့်တော်တဲ့ temperature မှာရှိမရှိ စစ်ဆေးပေးပါတယ်။ စစ်ဆေးပြီး ရက်လွန်ခါနီးအစားအသောက်တွေကိုတော့ waste မဖြစ်အောင် ငတ်မွတ်နေတဲ့သူတွေကိုလှူပါတယ်။ ဒီလို process တွေအားလုံးကို စက်တွေကပဲဦးဆောင်ပြီးလုပ်သွားတာ တကယ်ကိုတီထွင်ဆန်းသစ်မှုကြီးပါပဲ။
အွန်လိုင်းကနေ ကုန်စုံပစ္စည်းတွေရောင်းချနေတဲ့ Ocado အတွက် customer service ကလည်းမေ့ထားလို့မရတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ customer လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ တိတိကျကျ နဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် မှန်ကန်စွာရောက်ဖို့ကိုလည်း အလေးထားရပါတယ်။
Customer တွေက တကယ့် ကုန်စုံဆိုင်မှာဝယ်သလို supplier နဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံရတာမဟုတ်ပေမဲ့ ကုန်ပစ္စည်းလာပို့တဲ့ delivery သမားတွေနဲ့အဆင်ပြေအောင် Ai နည်းပညာကိုအသုံးပြုရပါတယ်။
Customer တွေဆီ မြန်မြန်ရောက်အောင် Ai အကူအညီနဲ့ ကားပိတ်နေတဲ့နေရာတွေ၊ delay ရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပို့ပေးရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် customer တွေရဲ့ email တွေ ဖုန်းလက်ခံပြောကြားတာတွေအထိ နည်းပညာအကူအညီနဲ့ပဲ အကုန်လုပ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Ocado နည်းပညာရဲ့ နောက်ထပ်တိုးတက်မှုတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကုန်စုံဝယ်ယူမှုအတွက် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Ai-based လိမ်လည်မှုကိုထောက်လှမ်းတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတိုင်လည်း Ocado ကနည်းပညာအကူအညီနဲ့ customer တွေအဆင်ပြေအောင် လိမ်လည်ဝယ်ယူမှုတွေကင်းဝေးအောင်လည်း တိုးတက်တီထွင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
AI ကတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်နေပြီး ယခုလို စီးပွါးရေးနယ်ပယ်အပြင် အခြားနယ်ပယ်များစွာကိုလည်း အနှေးနဲ့အမြန် ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ဒီလိုမျိုး smart platform တွေနဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်တာမျိုးလုပ်ဆောင်လာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။